ဒိန်းမတ်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ PLC ဖွဲ့စည်းခြင်းစီးပွားရေး Startup စာမျက်နှာ
ဒိန်းမတ် 2010 ၎င်း၏ဒိန်းမတ်ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအောက်တွင်ထူထောင် "Anpartsselskab" (APS) လို့ခေါ်တဲ့ဒိန်းမတ်အတွက်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) ကိုဖန်တီးဥပဒေရှိပါတယ်။ ဤသည်ဒိန်းမတ်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးကမ်းလွန်မော်တော်ယာဉ်အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့လူကြိုက်အများဆုံးအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များ၏တာဝန်ယူမှုကိုကန့်သတ်သောကြောင့် PLC အများဆုံးလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဥပဒေများနှင့်ဆင်တူသည်။
ဒိန်းမတ်ဂျာမနီ, နော်ဝေနှင့်ဆွီဒင်တို့ကနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ဥရောပ၌တည်ရှိသောနော်ဒစ်နှင့်စကင်ဒီနေးနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာတရားဝင်ဒိန်းမတ်၏နိုငျငံတျောဟုချေါသညျ။ ၎င်း၏မြို့တော်ကိုပင်ဟေဂင်နှင့်ရုံးသုံးဘာသာစကားက၎င်း၏နိုင်ငံသားများအများအပြားအားဖြင့်ပြောပြီဂျာမန်နှင့်အင်္ဂလိပ်နှင့်အတူဒိန်းမတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကတစ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဧကရာဇ်နဲ့ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးချယ်တင်မြှောက်ပါလီမန်နှင့်အတူတစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းပါလီမန်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိန်းမတ်တစ်ဦးရှိပါတယ် အရပ်ဘက်ဥပဒ စနစ်ကပိုပြီးအကောက်ခွန်အပေါ်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်ဂျာမဏီနှင့်ပြင်သစ်တွင်တွေ့မြင်ပြဌာန်းဥပဒေများတွင်တွေ့မြင်ရိုးရာဘုံအင်္ဂလိပ်စတိုင်အမှုဥပဒထက်အခြေခံပါတယ်။
တစ်ဦးကဒိန်းမတ်နိုင်ငံပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) အပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်:
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ရှယ်ယာရှင်များကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထိုက်သည်မဟုတ်မှသာမိမိတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကို၏အတိုင်းအတာအထိခံထိုက်ပေဖြစ်ကြသည်။
• အနည်းငယ်ကန့်သတ်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများ: တစ်ဦး PLC အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမရနိုငျသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများသာခုနစျပါးမျိုးရှိပါတယ်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်နိမ့်ဆုံးတစ်ဦး LLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
• အီးယူအသင်းဝင်: ဒိန်းမတ်ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ PLC များအတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန်စျေးကွက်ဖွင့်လှစ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
• အင်္ဂလိပ်: အင်္ဂလိပ်အများအပြားဒိနိုင်ငံသားများအားဖြင့်ပြောပြီဖြစ်ပါတယ်။
အာမခံချက်, ဘဏ်လုပ်ငန်း, စုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ, ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှု, အာမခံ, reinsurance, ယုံကြည်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် trusteeship စီးပွားရေးလုပ်ငန်း: ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်အောက်ပါအမျိုးအစားများမြားတှငျပါဝငျခွငျးနှင့်အတူတားမြစ်သည် မှလွဲ. တစ်ဦးကဒိန်းမတ်နိုင်ငံပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) အမျိုးမျိုးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်သွားရန်နိုင်ပါတယ် ။
တစ်ဦးက PLC နှစ်ခုအစိုးရအေဂျင်စီများမှာ register ရမယ်: အစည်းအရုံး၏စာချွန်လွှာများနှင့်ဆောင်းပါးများအဖြစ်ကောင်းစွာဒိနျးမတျစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ကုမ္ပဏီများအေဂျင်စီမှာမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူကုမ္ပဏီများ Registry ကိုမှတ်ပုံတင်နေကြတယ်။
ကဖြည့်စွက်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်. တိကျသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူမွေးစားစေခြင်းငှါအရာဒိနျးမတျစီးပွားရေးအာဏာပိုင်များထံမှရရှိနိုင်အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများ၏တင်းပလိတ်များရှိပါသည်။
2) ဒိန်းမတ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ရုံး (ရုံးချုပ်) ၏လိပ်စာ,
5) ကရှယ်ယာရှင်များ '' မဲပေးခွင့်,
7) ကိုကုမ္ပဏီ၏စာရင်းကိုင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်; နှင့်
အစည်းအရုံး၏စာချွန်လွှာနှင့် ပတ်သက်. ပြဌာန်းချက်များပါဝင်သည်ရကြလိမ့်မည်:
1) သည်အမည်များနှင့်ကမကထ၏လိပ်စာများ, စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ကုမ္ပဏီ၏စာရင်းစစ်;
3) ကရှယ်ယာကိစ္စကိုစျေးနှုန်း; နှင့်
PLC ရဲ့အခြားဒိန်းမတ်ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုပုံနဲ့တူတဲ့မကုမ္ပဏီအမည်ကိုကောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအကြံပြုချက်ပယ်ချခဲ့လျှင်ခွင့်ပြုချက်များအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုနာမကိုအမှီတင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်အကြံပြုသည်။
ကုမ္ပဏီအမည်များကိုအင်္ဂလိပ်လိုနိုင်ပါတယ်သို့သော်၎င်း၏အဆုံးမှာစကားလုံး "Anpartsselskab" သို့မဟုတ်အတိုကောက် "APS" တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုရမည်။
တိုင်း PLC အဆိုပါ PLC များ၏မှတ်ပုံတင်ရုံးအဖြစ်သူ / သူမ၏ရုံးခန်းပေးနိုငျတဲ့သူဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်နှင့်အတူဒေသခံတစ်ဦးရုံးလိပ်စာရှိရမည်။
တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်နိမ့်ဆုံးတစ်ဦး PLC ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များ privacy ကိုအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ တစ်ဦးက PLC မဲပေးအခွင့်အရေး, preference ကိုရှယ်ယာ, သာမန်အစုရှယ်ယာများနှင့်ရှေးနုရှယ်ယာနှင့်အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲအစုရှယ်ယာများကိုထုတ်ပြန်နိုင်ပါတယ်။
အနည်းဆုံးဒေသခံညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးကဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်သူကိုခနျ့အပျရမညျ။ သည်အခြားဒါရိုက်တာများနေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်, မည်သည့်တိုင်းပြည်တစ်နိုင်ငံသားနေထိုင်နှင့်နိုင်ပါတယ်; ဒါရိုက်တာအများစုအီးယူနေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းဒါရိုက်တာမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများခွင့်ပြုထားပါသည်။
နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော် DKK 50,000 (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 6,700 ယူရို) ဖြစ်ပါသည်။
ဒိန်းမတ် 0% ကနေ 22% ဦးရေအများဆုံးတစ်လျှောအခွန်ကောက်ခံမှုနှုန်းကိုရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အခွန်ထမ်းနှစ်ကြိမ်အတူတူဝင်ငွေအရင်းအမြစ်အပေါ်အခွန်ပေးဆောင်ရမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ဒိန်းမတ် 26 ကျော်နိုင်ငံများနှင့်အခွန်နှစ်ထပ်နှစ်စာချုပ်များရှိပါတယ်။
ဒိန်းမတ်ကုမ္ပဏီများသည်နှစ်စဉ်အခွန်ပြန် file ရန်လိုအပ်သည်။
ဒိနျးမတျအစိုးရနှင့်အတူတင်သွင်းထားတဲ့အရာအားလုံးအများပြည်သူအားဖြင့်သုံးစွဲနိုင်သည်။ သို့သော်ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များ privacy ကိုအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
တစ်ဦးဒိန်းမတ် PLC မရှိမဖြစ်မနေစာရင်းစစ်ရှိပါတယ်။
နှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျ PLC အစည်းအဝေးများလိုအပ်သည်နှင့်မဆိုတိုင်းပြည်အတွင်းကျင်းပနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက PLC စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း2မှ3အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဒိန်းမတ်နိုင်ငံ PLC အပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်: က၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များအဘို့ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုသာခုနစျပါးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများတစ် PLC များအတွက်ပိတ်ပင်တားမြစ်သည်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး PLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်, ဒိန်းမတ်အီးယူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး, အင်္ဂလိပ်အများအပြားနိုင်ငံသားများအားဖြင့်ပြောပြီဖြစ်ပါတယ် ဒိန်းမတ်၌တည်၏။